iMovie waa filimkii iyo video ciyaaryahanka hidi heli karaa nidaamka ka hawlgala Mac. Waxaa aad waa software waxtar leh taas oo ka caawisa in maaraynta, sixiddiisa iyo ekaysiinaya video files si hufan. Marka laga reebo kordhin default ee iMovie ah, haddii aad leedahay kale qaab kasta oo file video, waxaad marka hore la yeelan doonaan si ay u dajiyaan galay interface iMovie ka dibna waxa ay u isticmaalaan. Si kastaba ha ahaatee, in xaaladood dhowr ah, dadka isticmaala ay la kulmeen dhibaatooyin kala duwan oo soo degida faylasha MP4 video in iMovie. Haddii aad la kulanto dhibaato la mid ah, markaas halkan waa hage deg deg ah oo ku saabsan sida loo xaliyo.
Qaybta 1aad: Sida loo soo dejinta MP4 in iMovie on Mac iyo Windows
Qeybta 2: Sida loo badbaadi iMovie in MP4?
Qeybta 3: Maxaad Qaar ka mid ah MP4 Video Files Import in iMovie?
Haddii aad soo food saartay dhibaatooyin ka soo degida ee ah file video MP4 in iMovie, ka dibna waxaad ka fekeri kartaa diinta qaab MP4 ah qaab iMovie. Markii diinta file ay tani ku dhacdo, waxaad si fudud u furan kartaa file video cusub ee la gediyay in iMovie.
Wixii files diinta ka MP4 in iMovie, mid ka mid ah baakadaha software ugu fiican heli karo suuqa waxaa Wondershare Video Converter Ultimate nidaamka Windows (Wondershare Video Converter Ultimate u Mac nidaamka ka hawlgala Mac). Waxaa ku jira tiro ka mid ah muuqaalada dheeraad ah oo taageera tiro ka mid ah qaabab file. Marka aad soo bixi Wondershare Video Converter Ultimate, aad leedahay dhamaystiran maamulka file video software ka oo aan aad u beddesho kartaa oo keliya, laakiin sidoo kale videos download videos internet ka.
Haddii aad rabto in aad raacdo xal, markaas halkan yihiin tallaabooyinka:
Talaabada 1: Download iyo rakibi Wondershare Video Converter Ultimate
Waxba ma ahan in aad isticmaasho Mac ama Windows nidaamka ka hawlgala, waxaad si fudud u soo bixi kartaa Wondershare Video Converter Ultimate si aad u computer ka website . Software ayaa ku soo beegmay in version maxkamad iyo iibsiga labadaba si dadka isticmaala waxaa la siiyey xorriyad buuxda in ay isku dayaan software ugu horeysay ka hor inta aysan bixin. Marka aad soo bixi software ah internet ka, a user saaxiibtinimo saaxir kugu hagi doona habka loo xirxiro dhameystiran iyo sidoo kale waxaad dooran kartaa goobaha aad caado u dhexeeya.
Talaabada 2: Burcad software iyo dajiyaan file MP4 aad
Marka aad soo bixi software-ka, tallaabada xigta waa in ay abuurtaan. Wondershare Video Converter Ultimate Uu leeyahay user interface aad saaxiibtinimo si aad si fudud eegi kartaa iyada oo software aan tilmaamo kasta. Wixii diinta file MP4 aad gasho iMovie file socon video, dajiyaan MP4 faylka video jeclaystay. Waxaad ka furan kartaa file MP4 aad midkood u soo jiiday galay interface ama adigoo gujinaya ah "Add files" button. Gujinaya ah "Add files" button in sahamisa file ka halkaas oo aad ka dooran kartaa file la doonayo ee aad qaadan doonto.
Tallaabo 3: U beddelaan file MP4 aad
Marka aad furay aad gudbiso in Wondershare Video Converter Ultimate, aad haatan riixi kartaa ah "Beddelaan" badhanka si ay u bilaabaan diinta dhabta ah ee files. Ka dib markii gujinaya ah "badalo" button, waxaad u baahan doontaa in aad doorato qaabka wax soo saarka. Waxaa jira qaar ka mid ah fursadaha marka ay timaado qaab wax soo saarka iyo aad mid kasta waa la jaan qaada iMovie dooran kartaa. File MP4 ayaa dhowr daqiiqadood qaadan doonaa in ay sameeyaan qaab beddelidda.
qaab file iMovie si fiican u aqbaleen dadka laakiin waxaa suuro gal weyn oo aad jeclaan lahayd file iMovie in la ciyaaray qalab mobile. Dhamaan qalabka mobile ma taageeri qaab file iMovie taas oo ah sababta aad u baahan tahay si ay u badalo qaab file MP4. Tani waa suurto gal ah iyada oo laftiisa iMovie iyo ma aha in aad kala soo bixi wax kasta oo baakadaha software dheeraad ah waxaa loogu talagalay.
Si loo badbaadiyo iMovie in MP4, fadlan raac tallaabooyinka hoos ku qoran:
Talaabada 1: Burcad software iMovie iyo isticmaali fursad u dhoofinta
Ayaa aad hore waa in aan bilowno software iMovie ah. Dooro "share" doorasho ka bar menu ka dibna dooro "Dhoofinta Isticmaalka QuickTime" doorasho.
Talaabada 2: Dooro "Movie in MPEG-4" badbaadinta
Marka aad riixi on "Dhoofinta Isticmaalka QuickTime" doorasho ka menu share ah, suuqa kala pop up ah ka muuqan doontaa. Furmo suuqa waxa ku jira tiro ka mid ah fursadaha sida magaca, meesha file iwm Riix "dhoofinta" fursad u heli karaa suuqa kala tan iyo aad dalka doonaa ilaa diyaariyeen ah ee fursadaha sida "Movie in 3G", "Movie in MPEG-4" iwm Dooro "Movie in MPEG-4" doorasho ka pop ilaa iyo guji "badbaadin" badhanka si uu u badbaadiyo file iMovie sida MP4.
MP4 video files waxa ay noqonayaan aadka loo jecel yahay ka mid ah dadka ay sabab u tahay in sharcigaasi waafaqsan yahay inta badan oo ka mid ah telefoonada gacanta. Si kastaba ha ahaatee haddii aad isticmaalayso iMovie iyo MP4 wada, laga yaabo inaad la kulanto qaar ka mid ah dhaqanka qalaad. Mid ka mid ah dhaqanka noocaas ah waa in iMovie kaliya diido in ay aqbasho in aad file video MP4. Inkastoo software iMovie guud ahaan aqbalay files MP4, laakiin mararka qaar waxaa uu diido in uu tago oo user ka fikirayay sida waxa sabab u noqon karaan? Haddii aad sidoo kale ku go'doomey mid diraynaa sida, markaas halkan waa a kiisas yar oo ku saabsan waxa suurto gal noqon kartaa qalad haddii aad software iMovie aan la soo degida files MP4 hadda waan dumin doonaa iftiin qaar ka mid ah!
Si aad u noqoto arrin gaar ah, iMovie dhoofista files MP4 in ay yihiin encoded isticmaalaya MPEG4 / AAC ama data / AAC H.264. Haddii qaar ka mid ah codec kale loo isticmaalaa Deji aad file MP4 video, ka dibna codec kala duwan yihiin laga yaabo in mid ka mid ah arrimaha ugu waawayn ee sababta iMovie aan la soo degida file MP4 in. Mid ka mid ah xalka ugu talinayaa in dhibaatadan ay tahay in loogu badalo qaab aad file MP4 qaab la file socon iMovie.
By default, iMovie ku jira oo dhan codecs sida caadiga ah loo isticmaalo files MP4 ah. Si kastaba ha ahaatee waxaa jira faylasha MP4 kuwaas oo ka kooban codecs kala duwan ee ay audio iyo geeyo Cinwaan. Haddii codecs, kuwaas oo aan ka mid ahaa ee iMovie group codecs taageero, markaa waxa suurtogal ah in aad u weyn MP4 gaar ah oo aan la keeno in iMovie.
> Resource > MP4 > [xalin] iMovie ma dajiyaan doonaa MP4 Files